Uhambo lwesitimela olude kunazo zonke emhlabeni lude kakhulu! Lezi kulolu hambo kungathatha izinsuku eziningana bayigubungele izinkulungwane zamakhilomitha.
Lokhu uhambo yohambo ngokusebenzisa Southeast Asia kusukela Bangkok eSingapore. The train stops at River Kwai and Kuala kangsar. Isikhathi sohambo noma 3 noma 4 izinsuku. Ngaphezu kwalokho, kulolu hambo kujwayele ukuthatha izindawo ngezimpelasonto. Ngaphezu kwalokho, indawo yokuhlala iyimfihlo futhi kahle ehlotshisiwe. Ngenxa yokuthi izindawo compact it is kangcono zabahamba solo.
Okokuqala nje, akekho WiFi kulolu hambo onqamula. Ngakho, uzilungiselele ukuchitha isikhathi ubuka indawo. Ngenxa yokuthi izintaba, amahlathi, nezinye Canadian landscape uzobona kuyinto obumangalisayo. Uhambo iqala Vancouver futhi iphela Toronto. Jabulela ukhululekile olele izimoto, ngenkathi uthola amazwibela-moose, izinyamazane, ngisho namabhere.
Lokhu isitimela uhambo elide kakhulu izici elula olude ngqo wesitimela ithrekhi emhlabeni. Okokuqala, Abagibeli esakuthola ububanzi Australia. Ngaphezu kwalokho, ubuhle bendawo buhlanganisa izimpophoma, amahlathi, nezintaba eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ngenxa ubude bayo, kukhona izitobhi eziningi eziyinhloko kule umzila. The stops include Broken Hill, Adelaide, Barossa Valley, Kalgoorlie, Pheka, futhi Rawlinna. Izincwajana zemininingwane Amathikithi ngoba lolu hambo ibiza amanani ukuqala at phezu $600.
Nakuba lokhu isitimela yinde kunazo Trans-European route it only takes 2 izinsuku ukuqedela. Isitimela ushiya kusukela inhlokodolobha French futhi ifika enhlokodolobha yaseRussia. Ngoba lolu hambo enqamula Belarus uzodinga Belarus visa uuku ngcebeleka. Ngaphezu kwalokho, udinga i-visa ukuze ungene Russia.
#i-russia #singapore #thailand australia longtrainjourneys trainjourney Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelfrance